Fandroahana, ny fizahan-toetra maha-rosiana ny Fiangonana milaza fa ny fananana - ny Rosiana - amin'ny Al Jazeera - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Fandroahana, ny fizahan-toetra maha-rosiana ny Fiangonana milaza fa ny fananana - ny Rosiana - amin'ny Al Jazeera
'Nahatsapa tanteraka ny fahasambarana
Valaam, Rosia - Varvara Sergeeva ny lehibe-dadabe dia teo anivon ny an'aliny ny mpitondra fivavahana, mpitoka-monina, ny relijiozy ary ny mpino no novonoina ho faty amin'ny Kaominista iconoclasts tamin'nyPavel Orleansky efa nanompo ho toy ny diakona ao amin'ny fanajana Kristianina Ortodoksa monasitera amin'ny Valaam, ny farihy nosy fotsiny atsimo ny Finlandy. Sergeeva nianatra momba ny anjara avy declassified KGB archives tamin'ny, rehefa mandritra ny Perestroika fanavaozana ny URSS nankalaza ny arivotaona ny Kristianina ao Rosia. Tsy ela rehefa vita ny fianarako teny amin'ny lise, Sergeeva nanapa-kevitra ny haka baptised sy hamela ny teratany St-Petersburg fa Valaam mba hanampiana ny hamelona indray ny monasitera. Inona no mitranga dia mampino, 'hoy ny marevaka, ara-drariny ny volo taona tao amina"cafe"iray ao St-Petersburg. 'Araka ny tsipalotra ny bolshevik revolisiona, Kaominista ongotana Rosia ny Kristiana, Silamo, Jiosy sy ny Bodista, ireo vondrom-piarahamonina. Dia rava an'arivony ireo trano fivavahana, ary nitodika tany maro - miaraka ny tany an-tranom-bakoka, ny sekoly, ny teatra, ny paositry ny polisy, fonja, iraisana toeram-piompiana sy ny zaridaina.
Fa ny Fiangonana Ortodoksa rosiana, ny czarist fanjakana ny manjaka ny finoana, dia tsy manana ny ankamaroan ny fananana.
Efa ho telo ny taonjato maro ny Fiangonana no nanetsika toy ny governemanta andrim-panjakana izay ny mpitondra fivavahana dia nanompo tao amin'ny fiangonana sy ny trano fiangonana naorina, ary hatrany amin'ny andriana, ny mpivarotra, ny hafa ny governemanta vatana, ny miaramila, sy ny fiaraha-monina sivily. Ny firaisana Sovietika teo aloha ny taona, maro ireo Rosiana no nandray Orthodoxy mino ny Patriarchate Moskoa dia hanampy Rosia mandroaka ny Kaominista fotopampianarana. 'Ny Fiangonana dia tena misokatra ary ny ankamaroan'ny olona dia efa manantena fa tsy nahatsiaro tena ny Fiangonana dia hanampy amin'ny fananganana ny demokrasia, free Rosia, hoy ny Romanina Lunkin ny Akademia rosiana Science ao amin'ny Ivontoerana momba ny Eoropa. Ny Kremlin nanomboka nisy ezaka manokan'ny firenena manontolo mba restitute ara-pivavahana fananana, matetika praiminisitra real estate ao an-tanàna foibe na toerana fialam-boly. Fa ny Patriarchate efa mifidy. Fa tsy ny famerenana an'arivony konka noho ny fiangonana izany, dia mifantoka amin'ny fanta-daza amin'ny toerana izay afaka kosa ny tombom-barotra ary ny fikojakojana ny ao Kremlin mandoa, Lunkin milaza.
'Mahafinaritra izany toerana, tena madio, tena mazava
Ny filoha Boris-pahadisoana tamin'i yeltsin mihazakazaka aoka izany ny hetra-afa-miala ny orinasa fa tsy nivarotra ny toaka, paraky sy ny sigara sy ny diloilo, sy ny amin'izao fotoana izao ireo orinasa ahitana famoahana trano, toeram-pambolena, ny fananganana orinasa, toeram-pivarotana sy trano fandraisam-bahiny. Ny Patriarchate tsy boky ara-bola sy ny firaketana an-tsoratra, ary ny tombom-barotra isan-taona mitovitovy ny habetsaky ny $. bn, hoy Nikolay Mitrokhin, Rosia ny mpitarika manam-pahaizana manokana eo amin'ny fiangonana ny toe-karena.
Izany ihany koa ny vokany maromaro izay ahitana ny fanomezana avy amin'ny fanjakana, ny orinasa lehibe sy ny mpivavaka.
Patriarch Kirill Moskoa dia nahita ny fanaovana ny $, wristwatch tamin'ny taona. Ny septuagenarian mandeha amin'ny fiaramanidina manokana, ny fomba amam-panao-nanao, bala sy ny limousine ny lafo vidy yacht, izay tsy miankina dock amin'ny Valaam. Tamin'ny taona, rehefa ny lalàna federaly nanao famerenana amin'ny laoniny mora kokoa, ny ao Kremlin dia nahita Orthodoxy toy ny fanomezana manan-danja ara-asa. 'Ny foto-kevitra Kaominista tsy nisy intsony ary tena ara-potokevitra banga nivoaka. Ary mety tsy ho feno noho ny zavatra hafa noho ny fivavahana, ny Filoha Vladimir Putin hoy ny volana jona. Ny mpitondra fivavahana hanokana nokleary bala afomanga, ny niantsoany azy ireo ho 'ao Rosia anjely mpiambina'. Izany dia mitahy ny Kremlin tia ady manohitra ny Tandrefana fitiavan-tanindrazana amin'ny extolling Rosia ho mpandova ny fanjakana Byzance izay manohitra ny Katolika Andrefana nandritra ny taonjato maro. Patriarch Kirill ny kibo ny 'rosiana izao tontolo izao', na ao Mosko adidy 'hiaro' olona an-tapitrisany maro ny foko Rosiana ao amin'ny firaisana Sovietika teo aloha repoblika, indray Kremlin ny fanavaozana assertiveness. 'Ireto hevitra ireto hamarinina ny fananiham-bohitra any Ukraine - mpanohana,' Mitrokhin hoe, raha niresaka mikasika ny fanentanana goavana natao ao Kremlin-maso ny haino aman-jery, izay nilaza ny manampahefana okrainiana ireo mpitarika ny 'famonoan'olona' ny foko Rosiana.
Ny Patriarchate manameloka mitovy taovam-pananahana ny fanambadiana, ny fanalan-jaza, ny fanabeazana ara-pananahana sy ny VIH-ny fisorohana ny fandaharan'asa, ary mikendry ny hampahafantatra ny fivavahana tsy maintsy atao ny fampianarana any an-tsekoly.
Izany dia mandray ofisialy ny fanerena amin'ny hafa ny vondrona ara-pivavahana - anisan'izany ny mpisintaka Ortodoksa ny hetsika sy ny Protestanta - toy ny fitsarana ny fandraràna ny Vavolombelon'i Jehovah tamin'ny volana jolay ho ireo 'mahery fihetsika' ny fampianarany. Patriarchate-mpikambana ao amin'ny vondrona fanafihana ireo mpitsikera, fanafihana pelaka fikambanana ary nirotsaka ho neo-Nazi sy mahery setra ireo mpankafy baolina kitra. Rehefa Sergeeva nanorim-ponenana teo amin'ny ala nosy ny antsasaky ny habeny ny Manhattan ao amin'ny faramparan'ny taona, ny notapahiny ny monasitera ny trano tao amin'ny tranom-bakoka. Izy nahita an-trano ao amin'ny Ririnina trano fandraisam-bahiny, ny toeram-ponenana, ny tranom-bakoka ny mpiasa, izay naverina tamin'ny laoniny tamin'ny moyen âge sary masina sy ny frescoes. Izy sy ny an-jatony ny laika nosy mponina niara-nanaiky ny hiverina ny mpitokamonina Valaam tamin'ny. Sergeeva nanao miaina amin'ny fanjairana akanjo ho an'ny mpitoka-monina sy ny fahatsiarovana ny kitapo ho an'ny mpizaha tany. Izy dia nandray anjara vola manoloana ny fanavaozana ny trano fiangonana ny lehibe-dadabe nanompo tamin'ny sy nanangana ny zanany Dmitri toy ny mandinika Kristianina. Fa rehefa ny monasitera restituted ny trano fiangonana tany am-piandohan'ny taona, dia nanomboka nanery rehetra tsy ara-pivavahana ny mponina izay tsy miasa ho azy, nanolotra azy ireo trano any amin'ny tanibe tanàna addled amin'ny tsy fananana asa. Sergeeva tsy mety manaiky ny trano ao aloha slaughterhouse vaovao cladding fa tsy misy vainafo. Mpitsabo manam-pahaizana manokana dia hitako fa misy poizina holatra sy hamolavola nanarona ny tamboho. Taorian'ny taona maro ny fanoherana mafy ny fandroahana ary maro ny namoy ny fitsapana, dia lasa mitaiza ny toe-po sy ny zanany no voan'ny homamiadan'ny taolana. Dmitri, izay any famelana rehefa lava fitsaboana simika, miandry fandidiana, hoy izy. 'Ny eveka Pankraty, dia manery antsika mba hamono tena, indrindra ny sata ara-pahasalamana,' hoy Sergeeva, izay ankehitriny mipetraka amin'ny zanany lahy sy ny ray aman-dreny ao St-Petersburg. Amin'ny taona, ny afo simba ny Ririnina trano fandraisam-bahiny ary ny sasany dia mponina sisa, indrindra fa rehefa avy ny monasitera tapaka ny herinaratra sy ny rano fisotro, ny mponina teo aloha hoy izy.
Ny afo voatsimbina Sergeeva ny trano, fa tamin'ny volana jolay, bailiffs gaovana no nipoaka tany raha izy sy ny zanany lahy teo amin'ny hôpitaly ary nalain'ny fanjakana ny fananany.
Valaam farany laika ben'ny tanàna sy ny ex-mpamono afo Sergei Grigoriev dia milaza fa ny afo dia ny 'fandoroana nokarakarain'ny monasitera'. Iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny ny mponina teo aloha, Dmitry Sinitsa, dia miandry ny fitsaràna azy momba ny fandoroana ny fiampangana azy, saingy mitana ny tsy fananan-tsiny sy ny olona ahiahiana monasitera mpiasa nametraka ny fanorenana fahazavana. Back in, Grigoriev nifandray tanana tamin'ny Poutine tamin'ny Valaam - ary nitaraina taminy momba ny fandroahana. Izy dia tsy ho ela dia voatery nametra-pialana, ary dia voaraoka tao an-trano. 'Fa ny tanany cost ahy sy ankamamiana tokoa,' hoy ny gaunt taona ary monina any amin'ny tanibe tanàna Sortavala. 'Aho a noroahina bum ankehitriny. 'Ny monastera ny mpanao gazety fanompoana nandà tsy hanome fanehoan-kevitra sy ny hoe Al Jazeera ny Eveka Pancraty ny tafatafa miaraka amin'ny RIA Novosti masoivohom-baovao tamin'ny volana jolay izay hoy izy: 'ny Olona iray dia foana tsy faly amin'ny fampodiana azy. 'Latsaky ny mpitokamonina miaina ao amin'ny Valaam ankehitriny ny sasany trano mitokana trano amin'ny sauna sy ny garazy amin'ny SUVs. Nanomboka ny taona, ny nosy laika mponina nidina avy ny momba. 'Ny tanjona dia ny mba hany manana ny monasitera teo amin'ny nosy,' Patriarchate mpitondra tenin'ny Alexander eto volkov nilaza ny Novaya Gazeta isan'andro tamin'ny tapaky ny volana jolay.
'Mahagaga, ny sasany fahasarotana misongadina, ary izany dia sarotra ny hihevitra fa ny zavatra rehetra dia mandeha ao amin'ny painlessly.
'Valaam ihany sekolim-panjakana sy hopitaly no nakatona tamin'ny taon-dasa, ary An'i Kirill - izay antsoina hoe lahika mponina' ny olana 'bitika' - nandidy ny razing ny sakafo sy ny fahatsiarovana ny toeram-pivarotana sakafo karakaraina ny mpivahiny sy ny mpizaha tany.
Ankehitriny, izay rehetra hita ho mihoatra ny. ny olona izay mitsidika ny nosy isan-taona dia ny fototra, monasitera-mihazakazaka efi-trano sy toeram-pivarotana. Ny Patriarchate mitady hisambotra teo aloha barrack izay orinasa tsy miankina ny jirama ny fianakaviana ny taona Za-draharaha ny ady lehibe faharoa tany amin'ny tanàna atsimon'i Stavropol amin 'ny tany mitsangana eo indray mandeha isan' ny monastera. Ny manontolo voaro mafy tamin'ny moyen âge afovoan-tanàna afovoany ny Ryazan ho lasa fiangonana fananana amin'ny taona. Rava ny faha taonjato fiangonana sy ny manodidina necropolis misy ireo izay rava tamin'ny volana jolay mba hanome fomba vaovao-piangonana fasana taolana sy potipoti-javatra no hauled ny junkyard. Rehefa nafindra tany amin'ny Patriarchate, fiangonana ny mpisintaka Ortodoksa vondrona ao an-tanànan'i Suzdal hijoro banga, dia ny vao soratana frescoes korontam. Tamin'ny taona, ny manampahefana tao Kaliningrad, Rosia westernmost faritany izay anisan'ny Alemaina mandra, nafindra dimy lapa niaraka indray ny Crusades ary efa ho Katolika sy ny Protestanta trano. Mpitondra fivavahana ortodoksa 'tsy nahy' rava ny frescoes ao amin'ny Arnau fiangonana fa ireo dia naverina tamin'ny laoniny amin'ny alalan'ny zavatra fiantrana ho an'ny ny.
Iray amin'ny dimy-trano misy rihana ny rosiana Fikarohana momba ny Jono sy ny Oceanography any avaratr'i Moscou mijoro eo amin'ny fototry ny rava drelijiozy.
Ny fitsarana nandidy ny manontolo institute nifindra toerana na dia teo aza ny efa antomotra ny fandravana ny be pitsiny trano fampisehoana biby trano tandindonin-doza salmon karazam-biby. 'Ny ivon-toerana ny trano dia ho rava,' Kseniya Chernega, ny Patriarchate ny lehiben'ny mpahay lalàna, dia nilaza ny fitsarana ambony tamin'ny volana janoary. 'Ny fiangonana dia ho indray eo amin'ny toerany.
'Tsy hampiasa ny tsy miankina ireo mpisolovava mba hiara-miasa AMINTSIKA' rosiana Biraon'ny lehiben'ny Fampanoavana mba RT RT Ofisialy teny